७९ जना डिएसपीको सरुवा, को कहाँ? (नामसहित) – मुलधार न्युज
Home > समाचार > ७९ जना डिएसपीको सरुवा, को कहाँ? (नामसहित)
७९ जना डिएसपीको सरुवा, को कहाँ? (नामसहित)
३० श्रावण २०७६, बिहीबार १९:४६
काठमाडौं- नेपाल प्रहरीले ७९ जना डिएसपीको सरुवा गरेको छ। सरुवा सूचीअनुसार महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीमा डिएसपी रुगम कुवँर पुगेका छन्।
कुवँर डेढ वर्षअघिदेखि महानगरीय अपराध महाशाखाको इन्टेलिजेन्स पिलरमा थिए। सरुवा सूची अनुसार पूर्व क्षेत्रको प्रमुख केन्द्र इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको इन्चार्जमा डिएसपी धर्मराज भण्डारी गएका छन्।
उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत थिए। इटहरीका डिएसपी समीरचन्द्र खरेल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जाँदैछन्। भण्डारीको सरूवा भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा डिएसपी वीरेन्द्र शाही जाँदैछन्।
सरुवा सूची अनुसार महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा उमेश लम्साल, कमलपोखरीमा भरतबहादुर विक, इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडी चितवनमा भावेश रिमाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुमा नारायणप्रसाद चिमरिया, बझाङमा गणेश बम, रोल्पामा चित्रबहादुर गुरुङ जाने भएका छन्।
त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीमा विनोद शर्मा (भण्डारी), ताप्लेजुङमा ज्ञानेन्द्रप्रसाद फुयाल, सल्यानमा ढकेन्द्र खतिवडा, डडेल्धुरामा दधिराम न्यौपाने, तेह्रथुममा नवीनकिशोर प्रधान सरूवा भएका छन्।